Jovenna : zon’ny mpanjifa ny mametraka fitarainana raha… | NewsMada
Jovenna : zon’ny mpanjifa ny mametraka fitarainana raha…
Par Taratra sur 28/01/2016
Nampahafantatra ny kalitaon’ny solika ao aminy, omaly, ny orinasa Jovenna amin’ny fanamarinana rehetra tsara ho fantatry ny mpanjifa. Marihina fa eto Madagasikara, ny sampandraharaham-panjakana, «Service de la métrologie légale», minisiteran’ny Varotra sy ny fanjifana, manamarina ny kalitao sy ny fatra amin’ireo tobin-tsolika rehetra. Misy fitaovana, izay io SML io ihany no mametraka azy amin’ny toby fivarotan-tsolika rehetra, hanomezana toky ny mpanjifa, mba hisian’ny fifaninanana ara-dalàna. Zon’ny mpanjifa ny mametraka fitarainana raha misy ny tsy ara-dalàna.
Tsara ho fantatry, ohatra, ny fisian’ny fitaovana fizahana raha misy rano na tsia ny solika amidy ; na mifangaro na tsia ny gazoala sy ny solika fandrehitra. Ankoatra ireo fitaovana fitsapana mivantana, ao koa ny famantarana elektronika. Raha voamarina, ohatra, fa mifangaro rano, tsy maintsy ajanona avy hatrany ny varotra, araka ny fanazavan’ny tompon’andraikitra ao amin’ny Jovenna.
Atao ihany koa ny fizahana singa hafa raha toa ka manara-penitra : maripana sy ny havesatry ny solika. Ny « labochime » iray eny Ambatomirahavavy, mahaleo tena tanteraka, tsy fananan’ireo kaompania mpivarotra solika ireo fa manao fanaraha-maso ny kalitaon’ny solika amidy eto an-toerana, manamarina raha manara-penitra na tsia. Mitovy daholo ny kalitaon’ny solika vao tonga avy any ivelany. Mandray izany voalohany sy manamarina azy ny OMH. Rehefa mandray ny anjarany ny tsirairay, vao mampiditra « additif » ; « Prémimum » ny an’ny Jovenna.